यी हुन विश्व सुन्दरी जस्ता ‘ब्युटिफूल’ इन्स्पेक्टर साहेबहरू ! « SaighaliKhabar.com | सैघालीखबर डट कम
यी हुन विश्व सुन्दरी जस्ता ‘ब्युटिफूल’ इन्स्पेक्टर साहेबहरू !
सुरक्षा निकायको कुनै इकाईको प्रमुखलाई ‘साहेब’ भन्ने चलन स्वभाविक छ । कोही डरले भन्छन् कोही रहरले भन्छन् । केही प्रमुखसँग भेट्दा भने धेरैको मन फुरुङ्ग हुन सक्छ, उनका सुन्दरता देखेर । मान्छेको स्वभाविक मनोभाव भित्र भित्र आउन सक्छ ।
जति सुन्दर चेहरा हुन्छ त्यति सुन्दर कामको अपेक्षा सर्वसाधारणले गर्छन् । यहि अपेक्षाका केही खुड्कीला चढिरहेका छन्– ‘ब्युटिफूल’ इन्स्पेक्टर साहेबहरू । उनको भविष्य पनि सुन्दर नै देखिन्छ ।
सुन्दरता हेर्नेहरूको आँखामा हुन्छ भनिने गर्छ । तर, प्रहरीका म्याडमहरू कुनै र्याम्पका मोडलभन्दा कम छैनन् । उनीहरूको अनुहारमा चमक छ, उनीहरू प्राकृतिक रूपमा नै सुन्दर छन् ।
मोडलिङ र मिडिया सेक्टरबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी हुन्, एलिजा गिरी । प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनलाई ‘मार्क’मा राखेकै कारण कोटेश्वर प्रहरी प्रभागको प्रमुखको जिम्मेवारी पनि दिएको हो । त्यतिमात्र होइन, उनको आवाज पनि आकर्षक छ । यसैले प्रहरीका विशेष कार्यक्रमहरूमा उद्घोषणको पनि जिम्मा पाउने गरेकी छन् ।
एक त सुन्दर त्यहाँमाथि प्रहरीको व्यायामले उनीहरूलाई तन्दुरुस्त राख्छ । त्यहाँमाथि प्रहरीमा पनि त रोडमोडल युवती हुनपर्छ । यसले आकर्षक महिलालाई पनि प्रहरी सेवामा छिर्न उत्सुक बनाउँछ’, एक अधिकारी भन्छन्,‘नेपाल प्रहरीमा पनि केही यस्ता सुन्दर छन् ।’
हुन त प्रहरीको प्रभावकारी कामलाई सुन्दरता मानिन्छ । तर ग्ल्यामरको दुनियाँमा पनि विभिन्न पेशा व्यावसायमा रहेका व्यक्तिको चर्चा स्वभाविक हुन्छ । बैंकिङ, मिडिया अथवा प्रहरी सेवाबाहेकका पेशामा हुने सुन्दरताको मापन स्वभाविक मानिन्छ । तर, प्रहरीभित्रको ग्ल्यामर भने संसारभर नै चर्चाका लायक हुने गरेका कतिपय उदाहरण छन् ।
त्यसो त प्रहरीमा सुन्दर अधिकृतको परिचर्चा नेपालमा मात्र हुने गरेको छैन । फिलिपिन्सकी प्रहरी अधिकारी जेन ली कलाकायानको चर्चा मिडियामा व्यापक थियो । उनका फेसबुकमा पनि उत्तिकै फलोअर छन् ।
नेपालका एक पूर्वएआइजी भन्छन्,‘हामीले ग्ल्यामरको हिसाबले परिचर्चा गर्नु त गलत हुन सक्छ । तर, संगठनभित्र रहेका केही नयाँ अधिकृतहरूको सुन्दरताको व्याख्या नगरी बस्न सकिँदैन ।’
सुुन्दरताको उपमा पाउने अर्की इन्स्पेक्टर हुन्, शर्मिला गुरुङ । उनी विवाहित छिन् । तर, सुन्दरताको परिचर्चाबाट बाहिर छैनन् । इन्स्पेक्टर अनिल घिमिरेकी पत्नी हुन् । बलम्बु प्रहरीकी प्रमुख छिन् । सुन्दरतासँगै कामका लागि पनि उनलाई लामो रेस गर्नसक्ने क्षमतावान् मानिन्छ प्रहरीभित्र ।
छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानमा पनि सुन्दर प्रहरी अधिकारीको चर्चाले व्यापकता नपाएको होइन । पन्जाब प्रहरीकी हर्लिन मानको चर्चा सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्ममा भाइरल बन्यो । कतिपयले हर्लिनको तस्बिरलाई पोस्ट गर्दै आत्मसमर्पण गरी थुनामा बस्न आतुर रहेको भनाईसहित उनका तस्बिर भाइरल बनाएका थिए । उक्त खबर भारतीय अखबार इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको थियो ।
लाहोर प्रहरीकि एसएसपी डा. अनुश मसुद चौधरीको चर्चा पनि कम थिएन । उनलाई कतिपयले नाम परिवर्तन गरी राजिया सुल्तान पनि भने । जसको सुन्दरताको परिचर्चा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भयो । युट्युव, ह्वाट्स एप, भाइबरमा पनि उनका तस्बिरहरू पठाइएका थिए ।
सत्य सेवा सुरक्षणम् त प्रहरीको नारा नै हो । यो नारालाई आत्मसाथ गरेर आउने र्याम्प मोडलजस्ता असली प्रहरी अधिकारीको संख्या विस्तारै बढ्नुलाई सकारात्मक लिनुपर्ने बताउँछन् सुरक्षा अधिकारीहरू । उनीहरूको कामको पनि उत्तिकै सुन्दर चर्चा भयो भने प्रहरीमाथि हुने टिप्पणीमा पनि सुन्दरता आउन सक्छ ।
सार्वजनिक रुपमा माफी मागेपछि दुर्गेश लाई छोडियो